Waa maxay Heshiiska Faransiiska Faransiiska "Agréer"?
Sida Loo Xakameyo Xaqiiqda Faransiiska "Agréer" (si aad u Ogolaato)
Waxaad "Oggolaansantahay" Isku-dhafan "Agréer" waa sahlan tahay
Sida aad filan kartid, falka ficilka Faransiisku micnaheedu waa "in la isku raaco." Tarjumaadda waa mid fudud oo isku dhejin karta in lagu dhejiyo xukunka waa mid sahlan, sidoo kale waxay raacdaa habka caadiga ah ee ficilka .
Isku xidhka aaga Faransiiska Verb Agréer
Agréer waa ficil joogto ah . Tani waxay ka dhigan tahay in ay raacayaan xeerarka isku midka ah sida ficilada kale ee ku dhammaada, sida kufsiga (inuu ku farxo) iyo raaciye (ku lifaaqan) .
Waxaad ogaan doontaa waxa aad wax ka baraneyso isku-daridda mid ka mid ah ficiladaas ayaa loo adeegsan karaa kuwa kale.
Si loo xiro agréer , isticmaal shaxanka si aad ugu habboonaato mawduuca magaca 'j', tu, nous , iwm. Tusaale ahaan, "Anigu waan aqbalayaa" waa " j'agrée " iyo "waannu ku heshiin doonnaa" waa " agagaaraha agréerons ."
Marka ugu horeysa, xoogga saari xaadirka hadda, mustaqbalka, iyo isku xirnaanta isku xirnaanta sida aad u isticmaali laheyd inta badan.
agrée agréerai agréais
agrées agréeras agréais
agrée agréera agréait
agréon agréerons dulqaadka
agréez agréerez agréiez
gardarrada agréeront agréaient
Agrereer iyo ka qaybgalaha iminka
Xaaladda hadda jirta ee xayiraaddu waa mid aad u xun . Fiiro u yeelo sida aan u bedelnay dhammaystirkii -. Tani waxaa loo isticmaali karaa ficil ahaan, inkastoo laga yaabo inaad sidoo kale ka faa'iideysato adigive, gerund, ama cinwaanka xaaladaha qaarkood.
Habka Cuntada iyo Ka Qayb-Qaadashada
Si aad u sameysid shaxda darajada oo aad u muujisid "waafaqsan," waxaad u baahan doontaa inaad ku dhisto erey gaaban oo Faransiis ah.
Tani waxaa lagu sameeyaa ficil ficil ah , taas oo u baahan in la isku daro si maadada loo dhigo. Kadib waxaad isticmaali doontaa qaybtii hore ee agrée maaddo kasta.
Tusaale ahaan, "Anigu waan ogolaaday" oo noqda " j'ai agréé. "
More Agréer Conjugations
Waxaa jira dhowr dhuuban oo dheeraad ah oo laga yaabo inaad u baahato inaad ogaato. Inkasta oo dardaaranka fudud ee fudud iyo kuwa aan dhammaystirnayn ay ugu horreyn u yihiin qoraal rasmi ah, labada kale waxay isticmaalaan isticmaalka caadiga ah.
Isticmaal niyad jabka dabacsan marka aad rabto inaad sheegto in heshiiska qof uusan hubin. Shuruudaha ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan heer aan caddayn marka loo isticmaalo marka ficilka lagu heshiinayo uu ku tiirsan yahay wax.
Sare u fudud
agrée agréerais agréai agréasse
agrées agréerais agréas agréasses
agrée agréerait agréa agréât
dulqaadka Dhibaatooyinka agréâmes Dhibaatooyinka
agréiez agréeriez agréâtes agréassiez
gardarrada agréeraient agréèrent agréassent
Markaad rabto inaad isticmaasho waajibka si dhakhso ah u muujiso codsi ama amar, waad ka boodi kartaa erayga. Tusaale ahaan, halkii laga odhan lahaa " tuugsanaan, " waxaad isticmaali kartaa " agrée."
Faransiis Faransiis Dhexdhexaadin ah ma laha wax dembi ah
Sida Loo Xakameyn karo fiilooyinka Faransiiska Isbeddelka iyo Isbeddelka
Tilmaame loogu talagalay in lagu xakameeyo 'balayer' (si loo xaaqo)
'Prendre' (Qaadashada): Isku xirnaanta isku dhafan
Isticmaalka Verb 'Venir'
Tallaabo-tallaabo-tallaabo ah oo lagu xakameynayo Fududo Calaamadaha Calaamadaha ah ee Isbanishka
Halkee u? (Wohin?)
Tusaalooyinka Caqiidada ee Cunnada Falka
Lacagta Mustaqbalka ah ee Talyaaniga
Conjugations Italy: Rispondere
Maxay yihiin ficilada, iyo Sidee ay u isticmaalaan Isbaanish?
Baro Farshaxanka Faransiiska ee Manner
Anagu ma xitaa xitaa tan 20-kii Hablood ee Falaagada Khamaarista
Toddobadii Sanadood ee Dagaalkii 1756 - 63
1998: Bombaaniintii Omagh - Taariikhda Bambaanooyinka Omagh ee Waqooyiga Irland
Fahan Fahanka Siyaasadeed ee tarjumaadda
Shelf Sharciga ah: Naadi kala duwan oo Naadi ah
Kulannada Ugu Horeeya iyo Dhiirigelinta Jabbaan
Mareegta Monarch, Socdaalka ugu da'da dheer ee Kabaha Caalamka
Xayawaanka iyo Dabeecadda
Farqiga u dhaxeeya Faa'iidooyinka iyo deeqaha waxbarasho
VCU GPA, SAT iyo ACT Data
10 Tusalooyinka dhaarta erayada iyo afka qalaad ee Pop Music
Hiwaayadaha & Waxqabadyada
Laba 100 kaararka cagaaran (kaararka tarjunka)
George Bush ee 25-kii ugu dambeeyay ee ugu xumaa
Maxay ku xidhantahay qaabaynta NAACP?
George Washington: Xaqiiqooyin muhiim ah iyo Qoris kooban
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Ereyada Qoraalka Warqadda 1
Isagoo ku hadlaya magaca ugu fiican iyo ugu xun ee Isbaanish
Socdaalka iyo Cilmi-baarista Caafimaadka
10 Xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan Herbert Hoover
Yaa Xoojiya Saacadaha Waqtiga Kaydka?
3 Isbeddelada Qaadashadaada Ka Qaadan Doontaada Wanaagsan
Mustaqbalka Mustaqbalka 1980-yadii
Taageerida Faahfaahinta Qaabdhismeedka iyo Hadalka
John Alden Jr .: Sawirka ku yaal Salem Witch Trials
Qeexitaanka Qodobka Xuriyada iyo Tusaalooyinka
Dhexdhexaadinta iyo Dhibaatada Nabadgelyada Nooca Dhibaatada
Sida loo Isku Galo Ficilada Talyaaniga Sida Luqad